यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने «
यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नविकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइका कारण लाइसेन्स लिन सेवाग्राही वर्षदिन कुुर्नपर्ने बाध्यताका कारण त्यसको विकल्पमा विभागले अस्थायीरुपमा एक वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको हो । लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नविकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई क्यूआर कोडसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए । हालका लागि काठमाडौंको एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण सुरु भइसेको र क्रमशः देशैभरका यातायात कार्यालयहरुमार्फत वितरण गरिने पनि उनले बताए ।
अहिले स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि करिब ७ लाख सेवाग्राही महिनौ दिनदेखि लाइनमा छन् । विभागका प्रवक्ता डा. भुसालले अबको दुई महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम सुरु हुने पनि बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट कार्ड ल्याउन नसकेकाले छ सात महिनादेखि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको भन्दै अबको दुई महिनाभित्र वितरण गरिने बताए । उनले अबको एक, डेढ महिनाभित्र १४ लाख स्मार्ट कार्ड आउन लागेको जानकारी दिँदै कार्ड आए लगत्तै तीन सिफ्टमा काम गरेर भएपनि वितरण गरीने बताए ।
विभागले कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा ट्रायल परीक्षा यही भदौ २० गतेबाट सञ्चालन हुने जनाएको छ । लाइसेन्सका लागि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेर त्यसैअनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि देशभरका यातायात कार्यालयलाई पत्राचार गरी सकेको विभागको भनाइ छ । पहिलो चरणमा आवेदन दिएकाहरूको मात्र लिखित तथा ट्रायल परीक्षा र त्यसपछि मात्रै नयाँको लागि आवेदन खोल्ने पनि विभागले जनाएको छ । नयाँको लागि आवेदन खोल्न भने अझै केही महिना लाग्ने प्रवक्ता भुसालले बताए ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा ट्रायल परीक्षाका लागि छ लाख जनाको आवेदन परेको छ । विभागले लाइसेन्सको लागि आवेदन अनलाइनबाटै लिने गरेको छ ।